Haadha leenca: Haadha namoota intalashee gudeedan waldhaansoo qabde mo'atte - BBC News Afaan Oromoo
Haadha leenca: Haadha namoota intalashee gudeedan waldhaansoo qabde mo'atte
Nokubonga Qampi Afriikaa Kibbaa keessatti dubartii ''Haadha Leenca'' jedhamuun beekamtedha. Beekamtii kanas kan argatte eerga namoota intala ishee gudeedan sadii keessaa tokko ajjeesuun lamaan hafan madeessiteeti.
Isaan boodasa nama ajjeesuun wayita himatamteetti iyya ummataa guddaatu ta'e. Isaan boodas himannichi adda citee. Isheeniis haala mucaan ishee itti bayyanachuu qabdu irratti qofa xiyyafachuu eegalte.
Wayita bilbilli wamuun Nokubongaa irriibaa kaasuutti alkan wallakkaa ture.
Fageenya meetira 500 irratti intallli aaddee Nokubongaa Siphokaziin dhiiroota baayyee beekaman sadiin gudeedamaa jirti jette.
Somaalilaand gudeeduu hambisuuf seera jalqabaa baaste
Deebiin jalqabaa Adde Nokubonga poolisiif bilbilu ture. Garuu deebii hinargannee. Akka mandara ishee kan gaarreen magariisaa uffatee Baha Keepiitti argamu qaqqabuuf hanga ta'e itti fudhatus siriitti beekti.
Intal ishee gargaaruufis ishee qofatu jira. ''Sodaadheen ture, garuu mucaa tiyya waan taateef dhaquuf dirqisiifameera,'' jetti.
"Yeroon achi gahuutti duutee akkan waan argadhuuttiin yaadaa ture. Sababiinsaas namoota kanneen isheenis ni beekti waan ta'eef, isaanis ishee beeku waan ta'eef, akkasumas akka isaan beektu waan beekaniifuu, akka waa'ee isaanii hingabaasineef ni ajjeesuun jedheen yaade ture.''
Siphokazi mandara xiqqoo tokko keessatti hirriyoota ishee gaafachaa turte. Garuu hiriyoonni ishee sa'aatii 7:300 mana banaan ishee qofaashe rafuuf dirqamte turte. Isaan booda namoonni kunneen manneen tokko keessatti dhugaa turan sadii dhaquun miidhaa irraan gahan.
Goodayyaa suuraa Nokubonga booroo ishee keessa osoo demaa jirtuu
Manni aaddee Nokubonga kutaalee lama qaba. Tokko kutaa cisichaa bakka rafaa turteefi kutaa nyaata itti bilcheesan lafa haaduu argatte qaba.
"Kanan qabadhees lafa miidhaan itti qaqabeefi mana kiyya jidduu fageenya jiru deemuuf mataa kiyyaaf ture. Sababiin naannichi naga qabeessa waan hintaaneef,'' jetti. "Waan baayyee dukkanaa'eef ibsaa mobaayilii kiyyaa fayadamaan ture kanan deeme."
Akkuma manichatti siqaa dhufteen iyya intala ishee dhaggeesse. Ol yoo seentuus, ibsaan mobaayila ishee attamiin intalli ishee gudeeddaan irratti raawwatamaa akka jiru hubachu dandeesse.
"Soodaan natti namme...karra biran dhaabbachuun maal gochaa akka jiran gaafadheen. Akka ana ta'e yoo hubatan, gara kiyyatti qajeelan. Yaroo kana ture kanana ofi ittisuu akkan qabu hubadhees. Tarkaanfichiis battaluma ture., jetti Addee Nokubonga.
Nokubonga waan itti aansee ta'e ilaalchisee baayyee dubbachuu hin barbaaddu.
Abbaan aangaa mana murtii miidhaa qaqabsiisaniis aaddee ragaa Nokubonga akkuma nama intala ishee gudeedaa tureefi kaan lamaan ammoo kan dabareesaanii marsaa lammaffaa deebii'uuf surreesaanii buusuun eegataa jiran agarteetti ''baayyee miira keessa turte' mul'isa jedhe.
Abbaan seeraa Mbulelo Jolwana itti fufuunis: ''Aarii ishee yaa mo'attu jechuun isheef maal jechu akka ta'e nan hubadha.'' Garuu anni isheen sodaattu ofiifi intala isheetiif.
Fuulli ishees gaddaa fi miidhamatu irraa dhagahama.
Kunis baayyee ifaadha wayita namoonni lama albee ishee waliin wal lolaa turan waliin wal himattu. Osoo baqataa jiranu albeen warrantee tokkonsaa karaa foddaa baqata bahe. Lamaan isaanii baayyee miidhanii tokkonsaa ni du'e.
Addee Nokubonga hangam akka isaan miite illeen adda baasuu hin dandeenye. Intala ishee gara mana irriyaa ishee ollaatti futee deemte.
Poolisiin yoo qaqabu, Nokubongaa to'annaa jala olfamte gara buufata poolisii naannichaatti geeffamuun mana hidhaa galfamte.
"Waa'ee mucaa kiyyaan yaadaa ture,'' jetti. "Waa'ee ishee odeeffannoon argadhe hinturre. Anaaf baayyee cimaa ture."
Haaluma walfakkaatunis, intalli ishee Siphokazi hospitaala ciftee waayee haadha ishee yaadda'aa ture. Waggoota dheeraaf hidhamu isheetiif qalbiin cabeen.
"Kan waggoota dheeraaf mana hidhaa turte yoo ta'ee bakka ishee hidhamuuf yaadaan ture,'' jetti.
Goodayyaa suuraa Intala ishee Siphokazi fi Nokubonga Ammajjii keessa, erga miidhaan qaqabeen baatii 16 booda
Intalli ishee ammalleen naasuu keessa jiru. Waa'ee miidhiichaa waan xiqqoo ykn omaa hin yaadattu. Kan isheen amaan tana beektus, erga waasiin baatee booda kan haati ishee hospitaalatti guyoota lamaan booda itti himteedha.
Taatee sanaan booda waliin miira walii gargaaru eegalan.
"Gorsa kamiyyuu hinargannee garuu haatii kiyya na gargaaru dandeesse jirti,'' jetti Siphokazi. "Amma bayyanachaan jira."
Yaaliin haadha ishees jireenyi akkuma duraatii akka itti fufuu taasisuudha.
"Ani ammas haadha yoo ta'u isheenis intala kiyyaa,'' jetti. Walitti dhiheenya isaanii ibsuuf kolfaa fi baacuun, sababii Nokubongaan nama biraa hinqabaanneefuu Siphokazi herumu hindandeessu jedhu.
Erga baatiiwwan 18 miidhaachi qababee asi daandii dheeraa adeemaniiru.
Buhle Tonise, haadha alangaa Nokubonga bakka butee, torbee miidhaan qaqabeen booda wayita wal arganiitti abdii kutanii akka turan ni yaadatti.
"Haatii abdii kuttee ture'' jetti.
"Namoota hiyyummaa sadarkaa akkasii irratti argama waliin wayita wal agartu, haatii mana hidhaa akka galtu yaadu sababii nama isaan gargaaru waan hinqabaanneefu. Sirni haqaas kan namoota warra maallaqa qabaniiti.''
Buhle wayita Nokubonga waliin dubbattuutti, inatllishee callisteeilaalaa turte waan miidhaan irra gahee humna dubbachu ishee dhorkee tureefu.
Buhle akka haatii kun tarkanfii ofi ittisuuf fudhachu isheef morkachuun amansiisu akka dandeessu beektulleen, bu'aa booda keessa dhufuu malu dandamachuun baayyee cimaa akka itti ata'u sodaachu himti. Gargaarsi midiyaalee irraa argatan ammoo, akka haadha leencaatti akka ilaalamtuuf carraa kenneefiira.
Biyya Afriikaa Kibbaa keessatti taateewwan guddeeddii 110 guuyyaatti kan qaqabu yoo ta'u, kanas pirezidaantiin biyyatti Siiriil Raamaafozaan akka rakkina biyyaaleessaatti eeree ture.
Mandarri Keep Bahaa bakki iyyassee biyyatti, hojii dhabdoonni %45 keessatti argaman, bakkee biraa caalaa taateen gudeeddi keessatti baayyata.
Taateewwan guddeeddii kanneen keessaa kan haadha kanaa bahee dhagahame. Haatii kunis maqaan intala ishee akka hinbeekamneef dhoksu hindandeenye. Gaazexaan tokkoos 'haadha Leenca' jechuun suuraa leenca ilmoo ishee waliin jirtu tokko waliin baasee. Maqichis akkasumatti hafe.
"Anaaf jalaqabarratti, waan naaf hingalleefu hinjaalanne ture, jetti Nokubongaan. "Garuu dhumarratti ani goota jechu ta'uun hubadhee akka haatii leencaa ilmoshee irraa balaa ittistuutti.''
Ummannis haatii kun ajjeechaan himatamuuf akka jirtu dhegeenyaan maallaqa walitti qabuun abbaa seeraan akka gargaaramtu taasisan. Ta'us hanga mana murtiitti yeroo jalaqabaatiif dhiyaatuutti baayyee sodaataa turte.
"Gara mana murtii deemuuf yoo jedhu waanan sodaadheef ka'een kadhannaa taasise'' jetti.
Achi yoo geessuuttis namoota waan gaarii siheef hawaniin gutameera eddoon.
"Namoonni gutuu Afriikaatii bahan hundi achi turan. Anis namootaaf galatoomaa qofa ture. Dhugaattis abdii naaf kennaniiru"
"Waamamuunis himannichi kufuusaa natti himan,'' jetti. "Achi dhaabachuun dinqisiifachuu eegale. Baayyees nan gammade. Sirni haqaa dogongoraan akka mirga adda baasuun ani nama ajjeessuuf yaaddoo akkan hinqabaanee natti himeen beeka.''
''Erga dhimmicha kuffiifamee booda, intala ishee waamte. Intalli ishees yeroo jalqabaatiif yoo kofaltuun arge. Haatiis jarreen gara mana hiidhaa yoo deeman arguun barbaada jette,'' jechuun himti haatii alangaa isaanii.
Sunis akka ta'uuf waggaaf eggachu qabu ture. Garuu Muddee 2018 namoonni miidhaa qaqabsiisan lamaan; Xolisa Siyeka kan umuriin waggaa 30 fi Mncedisi kan umuriin waggaa 25 lamaanuu murteen hidhaa waggaa 30 itti murtaa'eera. Jarreen kunneenis haadha inatala tanaatiin gosa tokkoraa dhalatan.
''Waa'ee isaatiif baayyeen gammade,'' jetti Siphokazi kan amma umuriin waggaa 27. ''Amma xiqqoo nagaan natti dhagahame, keessi kiyyaa hidhaa umurii gutuu itti murtaa'u qaba jedhe amanulleen.''
Erga dhimmichi mana murteetiin xumura argateen boodas warroota akka ishee miidhaan guddeeddii mudateef cimina kennuuf maqaashee ifa taasifte.
"Erga balaan akkasii namarra qaqabeen booda jireenyi jiraachusaa hawaasattin hima. Ammas jireenya kee jiraachu dandeessa,'' jetti shamarreen balaa irra gaheerraa boqattees.
Haati isheetiis warra gochicha raawataniifis fuladurratti jireenya gaarii hawitiif. ''Yeroo murtee saanii xumuraniitti akka nama geedarameetti gara manasaanii deebii'uu jedheen abdadha,'' jetti. ''Isaan boodas seenaa himuufi fakkeenya ta'uun jiraachuf.''